Khidmadaha Gaadiidka Dadweynaha ee Caasimadda RayHaber | raillynews
HometareenkaKharashka Gaadiidka Dadweynaha
14 / 06 / 2014 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Kordhinta khidmadaha Gaadiidka Dadweynaha ee Caasimadda: Marka loo eego qiimaha kirada cusub ee loo dejiyay Ankara, basaska EGO, gantaal buuxa oo loo yaqaan '2 TL,' oo laga dhimayo 1,50 TL ee Ankaray iyo Metro.
Kadib imaatinka qiimaha gaadiidka dadweynaha ee Istanbul shalay, maanta Ankara, Xarunta Isuduwaha Gaadiidka (Ukome) sida ku xusan jadwalka ay go’aamiyeen Basaska Golaha Guud ee EGO, Ankaray iyo Metro buuxa ee 2 TL, dhimis xaraashka 1,50 TL, khidmadda wareejinta waxay ahayd 0,67 penny.
Qiimaha '33 AYDIR' isma badalin
Sida ay sheegayaan wararka laga helay Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara, qaanuunka cusub waxaa lagu sameeyay khidmadaha gaadiidka dadweynaha. Xarunta Golaha Guud ee Isku-duwidda Gaadiidka (UKOME), lacag-bixinnada cusub ayaa lagu go'aamiyay gaadiidka dadweynaha Caasimadda, halkaas oo aan wax isbeddel ah lagu sameyn bilaha 33.
GUJI RIIX 2 WAS TL
15 Sida ku xusan jaangooyada cusub, oo la adeegsan doono laga bilaabo Axadda, basaska EGO ayaa loo kordhiyay 1,75 TL oo ah 2 TL ee Metro iyo Ankara, iyo qiimo dhimis (arday, macallin iwm) raacitaanka 1,30 illaa 1,50 TL. Waxaa la go'aamiyay in lagu wareejiyo khidmadaha kala wareejinta gawaaridan gaadiid ka 0,59 Kuruş oo loo beddelo 0,67 Kuruş.
BILAASH MINIBUS TARIFF
Iyada oo loo eegayo canshuuraha cusub ee ay go'aamisay Boqortooyada Ingiriiska (UK), safarka buuxa ee basaska guud ee gaarka loo leeyahay ayaa laga kordhiyey 2,10 TL ilaa 2,40 TL, halka qiimaha tikidhada laga dhimayo sidoo kale laga kordhiyey 1,30 TL ilaa 1,50 TL. Duullimaadyada minibus-gaaban ee ka socda 2,10 TL illaa 2,40 TL, duullimaadyo minibus-masaafo dheer ayaa ka socda 2,40 TL illaa 2,75 TL.
TARIFF cusub ayaa bilaabi doonta maalinta sabtida
Dakhliga cusubi wuxuu bilaabayaa in la dhaqan geliyo laga bilaabo Axadda ilaa bisha June masuuliyiinta 15, saraakiisha, shidaalka, korontada, gaaska dabiiciga ah iyo alaabada dheellitirka ah ayaa lagu kordhiyay heerar kala duwan, inkasta oo bishii 33, aysan jirin wax ku soo kordhay gaadiidka dadweynaha ee caasimada, ayuu xusay. adeegga gaadiidka dadweynaha ugu raqiisan Turkey ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in Ankara la siiyo masuuliyiinta, wax isbedel ah ku sameeyey kharashka gaadiidka dadweynaha ee ku saabsan 3 sano, waxay hoosta ka xariiqay in ay lahaayeen si ay u sameeyaan qabanqaabada cusub.
Khidmadaha Gaadiidka Dadweynaha ayaa yimid Ankara! ..
Khidmadaha Gaadiidka Dadweynaha ee Sakarya
Kordhinta Khidmadaha Gaadiidka Dadweynaha ee Ankara
Turkiga ayaa soo gabagabeynaya hindisaha mashruuca isgaarsiinta tareenka isku dhafan
Madaxweyne Babas Kastamonu mar labaad oo ku saabsan ajandaha mashruuca telefishinka